काठमाण्डाैंमै बन्ने भो चार नयाँ शहर, कहाँ कहाँ बन्दैछ नयाँ शहर? जान्नुहाेस – KhabarTime
जब अजिंगरले यस्तो डरलाग्दो तरिकाले कुकुरलाई आक्रमण गरेपछी ,सामाजिक संजालमा भिडियो भयो भाईरल – भिडियो सहित
शेयर बजार : नेप्से र कारोबार रकम दुबैमा आयो भारी गिरावट
राप्रपाको मेची महाकाली यात्रा आज काठमाडौं आइपुग्ने, शुक्रवार समापन हुने
सिके राउत पक्षबाट ११ बूँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप
मलेसियामा अलपत्र परेका यी नेपालीहरूको उद्दार गरि स्वदेश फिर्ता
काँग्रेस बरिष्ठ नेता पौडेलले भने– “सरकार पूर्णरुपमा असफल भयो”
जनप्रतिनिधिका डोजरमा आगो लगाउ – दिपशिखा
मञ्चमै बेहोस भएर ढलिन् नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीः अस्पताल भर्ना
काठमाण्डाैंमै बन्ने भो चार नयाँ शहर, कहाँ कहाँ बन्दैछ नयाँ शहर? जान्नुहाेस
पाँच वर्षमा शहर नै तयार पार्नेगरि काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले स्मार्टसिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता र स्थलगत रिपोर्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले अहिले परामर्शदाता कम्पनीले स्थलगत रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको बताए । चारवटै स्मार्ट शहरकालागि आगामी असार मसान्तसम्म डिपिआर तयार पार्ने गरि काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
सरकारी योजना अनुसार काम अघि बढे अब केही वर्षमै काठमाडौं उपत्यकाका चार कोणमा अत्याधुनिक नयाँ सहर बन्नेछन् । कसैले तिनलाई नयाँ सहर र कसैले ‘स्मार्ट सिटी’ नामाकरण गरेका छन् । जहाँ हालसम्म विश्वमा उपलब्ध सबैखाले सहरी सुविधा र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी यस स्मार्ट सिटीको अवधारणामा चार नयाँ सहरको अवधारणा अघि बढाएको हो । यी सहरमा उपलब्ध ‘स्मार्ट’ सुविधाको कुनै पनि सीमा नभएकाले नयाँ सहर नामाकरण गरिएको प्राधिकरको दाबी छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
भाइरल गायिका समिक्षा अधिकारीको दोस्रो गीत ‘वनमा काफल पाक्यो… ट्रेण्डिङमा पर्न सफल... भिडियो सहित
कुवेतमा भट्टी सञ्चालनमा आबद्ध ४ नेपाली पक्राउ
आज पवित्र सांस्कृतिक पर्व ‘माघे संक्रान्ति’ यस्तो छ मनाइने चलन?
Share 389 Tweet 0
इजरायलमा विरामी पर्नु भएका सुवास खरेल सबुलार्इ सहयोगी मनहरूमाे समाजकाे नेपालमा सहयोग
टानको आयोजनामा हुने भयो शेर्पा-बाबुछोराको विशाल अभियान – भिडियो सहित
© 2019 Khabartime Media Pvt.Ltd - By KarnaliSoft.